Manao vakansy ny tontolo iainana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mbola ao anatin’ny ady
amin’ity tsimokaretina Coronavirus ity
izao tontolo izao. Misy ny mbola mampitombo
ny andro fihibohana. Misy firenena, toa antsika,
efa miroso na mieritreritra
ny fialana tsikelikely amin’izany fihibohana izany.
Ny tsy azo lavina dia
ny tsy maintsy hisian’ny « aorian’ny Covid-19 ».
Azo – ary tokony - saintsainina dieny izao ny momba izany.
Nanova an’izao tontolo izao ny fisian’ity Coronavirus ity. Niova hatrany ifotony ny fiainan’ny zanak’olombelona amin’ny ankapobeny. Eo ny fiantraikany amin’ny fiarahamonina sy ny toe-karena, fa tsy azo odian-tsy hita ny nentiny teo amin’ny tontolo iainana. Vao herinandro roa nanaovan’ny Sinoa ny fihibohana fotsiny (tamin’ny volana febroary), dia efa nazava ny habakabaka tany Chine. Tsy hita intsony ilay setroka be nampalaza an’ity firenena ity sy ny indostria vaventy ao aminy. Dia nanahaka an’izay avokoa, saika isam-pirenena. Ny tany Inde koa dia nampitolagaga toa izany. Ary anisan’ny voamarik’ireo mipetraka any an-toerana fa dia tsy nisy intsony koa ilay tabataba mankarenin-tsofina manerana ny tanàna. Nilamina e!
Nandoto ny tontolo iainana tokoa isika
Fivoriana an-tampony firy moa izay no vita niatrehana ity fahasimban’ny tontolo iainana ity? Toa tsy nisy heviny ireny satria na vola be tokoa aza no natontona dia nanohy ny ataony ihany ny olombelona. Ireo firenen-dehibe manana indostria goavana tsy mahafoy mampitsahatra ny famokarana ataony. Tombom-barotra no hany ao an-tsainy. Ireo mpitrandraka harena an-kibon’ny tany sy an-dranomasina dia nitroka an’ireo akora sy zavamaniry ary biby sy trondro tsy niraharaha izay hihafarana. Toy ny tsy manam-pahataperana ny fiheverany azy. Fa rehefa tapitra ny eo dia mifindra toeran-kafa indray. Ary ireo firenena madinika, tena tompon’ny akora, dia matin’ny vola sy ny ampahany (kely) omen’ny goaibe, ka dia manaiky lembenana. Indrindra moa rehefa teren’ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola iraisam-pirenena. Tsy niaina mihitsy ny tontolo manodidina amin’ny nanaovan’ny olombelona azy! Tsy “niaina” fa izao kosa izy, hatramin’ny volana marsa no mankaty, dia mba afaka misento.
Tsimokaretina bitika kely
Tsy ny fivoriana tetsy sy teroa na ny fifanarahana sy fanaovan-tsonia nitetezana vazan-tany no nahatonga izany fa tsimokaretina kely anankiray. Tsimokaretina nitombo izaitsizy ary nampivarahontsana izao tontolo izao. Tsimokaretina nahafaty olona efa ho 180.000 ary nankarary sy mbola mankarary olona maherin’ny 2,5 tapitrisa hatramin’izao. Marina fa misy 7 hetsy eo ho eo kosa no sitrana fa na izany aza, tsy mbola nisy ohatra an’ity, ho antsika taranaka (génération) ankehitriny.
Dia io tsimokaretina io no nampanapa-kevitra ny olombelona hihiboka an-trano sy hifanentana amin’izany. Satria aretina vaovao izy ity ka tsy mba toy ny ady iatrehana fahavalo no atao aminy fa ady atao anaty fandosirana sy fiafenana araka izay azo atao. Ary dia ny fijanonana an-trano no hany tena ahafahana mandositra sy miafina azy aloha hatreto. Tao anatin’ny andro vitsy àry dia “niato” ny fiainan-dRaolombelona. Zara raha misy miasa, tsy misy mankany an-tsekoly intsony. Ny mivoaka ny trano aza, voafetra na tena voarara mihitsy. Fiainana hafa tsy nampoiziny ho azo tanterahina akory izany. Ny miriaria eny an’habakabaka amin’ny fiaramanidina mantsy no efa ifaninanany. Ny mitety izao tontolo izao no efa zava-mora ho azy.
Ny niaraka tamin’ny ankohonany andro aman’alina, dia efa zavatra nohadinoiny. Ny nitodika sy nifampitsinjo amin’ireo sahirana kokoa noho izy : tsy dia nifantohan’ny sainy. Izany mitodika amin’Andriamanitra izany, efa maro no nandà azy. Miainga maraina, tsy mipody raha tsy hariva no andavanandrony. Ny manenjika ora, mifanosika mamonjy fiara fitaterana, manao kibo an-tsena…tsy manana fotoana ho azy fa jembin’ny asa aman-draharaha. Izany no isan’androny. Na ny faran’ny herinandro aza, mila tsy hisy hakany aina akory. Ankehitriny anefa: teren’ity tsimokaretina ity hiato, hijanona, hanam-potoana amin-javatra hafa izy!
Marina fa misy takalony manahirana izao fiatoana izao. Misy mantsy ny very asa. Misy ny lavitra ny tany niaviany. Ao ireo lany vatsy. Maro dia maro ny sahirana. Ary indrindra indrindra misy be dia be ny marary, ny nodimandry, ny sahirana mitsabo na nidonam-pahoriana, ny voatery miasa mafy manampy ireo marary sy sahirana isan-tsokajiny. Fa tsy izany kosa ny an’ny tontolo manodidina. Ny zavaboary hafa ankoatran’ny olombelona. Miaina izy ireo. Madio kokoa ny rivotra. Milamina ny tanàn-dehibe. Madio ny eny an-drenirano sy eny an-dranomasina. Misy toerana tsy nahitana biby na voronkely na trondro sy biby an-dranomasina, no nanjary nahitana izany tato ho ato, indrindra fa any amin’ireo firenen-dehibe. Voaporofo zato isan-jato fa ny olombelona no manimba ny tontolo iainana, ka rehefa miato amin’ny fanaony izy dia afa-miaina io tontolo io.
Misy azo saintsainina ho an’ny hoavy
Raha ny lafy tsaran’izao zava-misy ankehitriny izao no heverina dia ny fihatsaran’ny tontolo iainana no mitana ny saina. Miomana amin’izay ho ampitson’ity ady amin’ny Covid-19 ity isika. Koa raha ny ekolojia no hifantohana dia misy fahazarana azo tamin’ny fihibohana, izay tsara tohizina sy trandrahana.
Fanaontsika olombelona, entanin’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena sy ny fikambanana isan-tsokajiny ny manokana andro samihafa ho an’ny Tany, ny Rano, ny Tontolo iainana sns… Misy koa ny andro ifanentanana tsy hifohana sigara, tsy hampiasana fiarakodia, ets… Rehefa zohiana dia tsy hita taratra izay tena noentin’ireny andro natokana isan-taona ireny. Mazàna aza moa dia fihetsiketsehana sy kabary lavareny ary peta-drindrina sy doka amin’ny haino aman-jery zara raha misy mijery, no andaniam-bola sy fotoana. Dia toy ny hoe “hetsika tsy maintsy atao ka dia atao”. Misy hoeritreretina izao fiatoana andro maromaro, ahitana porofo mivaingana amin’ny fihatsaran’ny tontolo iainana izao.
Mba tsy hanao soavaly tapa-kofehy aloha, voalohany indrindra. Ka hoe raha vao vita tanteraka ny fihibohana dia “ento aho ray tongotro” hiverina amin’ny fanimbana ny tontolo toy ny teo aloha. Hiverina amin’ny havoretrana rehetra, ny fitrandrahana tsy amim-piheverana, ny fanadinoana ny ankohonana sy ny hafa manodidina ny tena… Faharoa manaraka izany, hahatsapa fa tsy ao anatin’ny iray andro intsony no hifanentanana amin’ ny tokony hitandrovana ny tontolo manodidina fa isan’andro. Ary raha ilaina ny manokana fotoana ho an’ity Tany, tranobe iombonana, ity dia tsy ho azo atao ve ny “mampanao vakansy” azy mandritra ny roa herinandro isan-taona ahay ? Efa iainantsika izany ankehitriny. Tao anatin’ny sarotra no nanaovana azy. Hita ny vokany na dia tao anatin’ny hamehana aza. Koa raha hifanarahana sy hiomanana, nahoana moa no tsy ho azo tanterahana? Ny vola atokana amina fivoriana sy hetsika tsy ahitam-bokany etsy sy eroa no hiatrehan’ny isam-pirenena izany fiatoana isan-taona izany. Nofy azo tanterahana izany raha misy ny finiavana hitsinjo ny taranaka hoavy.